Chineke na-eziga dịghị ikpe | Apg29
Chineke na-eziga dịghị ikpe
Kama, o zitere Jizọs na Mmụọ Nsọ ka ụwa anyị!
Na Chineke ga ezite ikpe na Assembly bụ a heresy. Jizọs bịara bụghị ikpe ụwa, kama ịzọpụta ya.
Anyị aghaghị ịghọta otu ihe dị ezigbo mkpa ihe: Na ọgbụgba ndụ ọhụrụ, Chineke na-eziga dịghị ikpe, ma ọ ga-eziga Jesus, Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa!
John 3: 16-17. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bula nke kwere na ya ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara ya n'ime ụwa ikpe ụwa ma na ụwa nwere ike site n'aka ya zọpụta.
Ọdachi na ọrịa bụ ihe na-eme na a na-emebi emebi na ụwa rụrụ arụ.
Rịba ama ihe Jizọs kwuru banyere ọdachi na a maara na mere na Jerusalem:
Luke 13: 4 "Ma ọ bụ ndị na asatọ ụlọ elu dị na Silom dara na gburu, ka i chere na ha bụ ndị njọ mmehie karịa ndị ọzọ niile bi na Jeruselem?"
N'ebe a, Jizọs na-ekwu okwu nke ọ bụla Chineke ikpe na ndị na asatọ, bụ onye nwụrụ na mberede. Ọdachi eme ná ndụ anyị.
War, ime ihe ike na ọnwụ mberede na-eme:
Luke 13:12. Ma n'otu oge ruru ụfọdụ na gwara ya nke Galili, onye ọbara Paịlet gwakọtara ha n'àjà ha. Jisus zara, si ha, sị: Ị na-eche na ndị a Galili ka njọ mmehie karịa ndị ọzọ niile Galili, n'ihi na ha tara ahụhụ nke a?
Jesus na-ekwukwa banyere agha, ụnwụ nri, ọrịa na ala ọma jijiji:
Matthew 24: 6-7. Na ị ga-anụ mkpọtụ agha na asịrị agha. Jide n'aka na ị ga-esi Ujo, maka niile a ga-eme, ma ọgwụgwụ erubeghị. N'ihi na ndị mmadụ ga-ebili megide mba, alaeze megide alaeze, a ga na-ụnwụ nri na-otiti na ala ọma jijiji n'ọtụtụ ebe.
Ma nke a abụghị Chineke kpere n'ikpe! E nwere ihe na-eme ná ndụ anyị na-ahụ n'ụwa taa.
Jesus eziga dịghị ikpe
Jesus eziga dịghị ikpe! Ọ bụ Onye Nzọpụta onye bịara ịzọpụta anyị. O zitere nke mmụọ nsọ na Pentikọst, nke mmadụ niile. - Ọ dịghị otu onye ha!
Mmụọ Nsọ bụ n'ezie ọ dịghị ikpe ma ọ bụ ikpe. Ọ enyere anyị aka!
Taa bụ nzọpụta oge! Taa, onye ọ bụla na-enweta Jesus Christ na-azọpụta - zọpụta! - Ọ bụghị na-aga ibibi!
Na ihe a niile bụ nke amara! Ị na-azọpụta site na okwukwe na Jizọs site amara. Ọ na-adịghị adabere n'ọrụ nke ha, ma site na amara.
Amara oge na-emetụta taa!